अष्ट्रेलिया विशेषः होमलोनमा उदाएका किरण
सोमबार, २१ माघ, २०७५
सिड्नी । मानिसका जिवनमा विभिन्न आरोह अवरोह आउँछन् । तिनै आरोह अवरोहका अनुभव संगाल्दै र कमजोरी त्याग्दै अघि बढ्ने हो भने सफलता पर छैन । डा. किरण थापाको यही विश्वासले आज उनलाई उत्कृष्ठ होमलोन ब्रोकर मात्र बनाएको छैन, ठूला सपनाको ढोकैमा उभ्याएको छ ।
सन् २ हजार ९ मा सिड्नीको समरहिलमा बल्लतल्ल थोत्रो घर डेरामा पाएका किरण थापाको अहिले सोही आसपासमा मात्रै ४ वटा प्रोपर्टी छन् भने अस्ट्रेलियाभर अझ धेरै नै । इमान्दारिता र लगनशिलताकै कारण सन् २ हजार ११ मा झोलाबाट सुरु गरेको कम्पनी क्यापकनले उनलाई यति धेरै घरको मालिक मात्र बनाएको छैन अस्ट्रेलियाकै २० औं उत्कृष्ट होम लोन ब्रोकरको परिचय पनि दिलाएको छ । जिल्ला उर्जा अधिकृत हुँदै ट्राफिक इन्जिनियरदेखी अस्ट्रेलियाकै २० उत्कृष्ट होमलोन ब्रोकरका रुपमा स्थापित उनै किरण थापाको सफलताको कथा हामीले यस अंकको नेपालीपत्रमा समावेश गरेका छौं ।
सन् २ हजार २ मा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेपछि किरण थापाको जागिरे जिवन सुरु भयो । स्नातक नसक्दै वैवाहिक जिवनमा प्रवेश गरेका उनलाई जिम्मेवारीकै कारण पनि जागिर गर्नुपर्ने आवश्यक्ता थियो । माओवादी युद्धका कारण उपल्लो पदका मानिस गाउँ जान डराउन्थे । त्यसैले किरणले मौका पनि मज्जैले पाउँथे । किरणले ग्रामिण उर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला उर्जा अधिकृत भएर ओखलढुँगामा १० महिना बिताए । ‘२ दिन लगाएर पनि साइटमा गएको याद छ । तर अहिले सम्झँदा तिनै दिनहरु आजको सफलताको जग बनेका छन् जस्तो लाग्छ’, किरण सुनाउँछन् । गाउँमा बस्नुपर्ने भएपछि त्यहाँका मानिससँग घुलमिल हुनुपथ्र्यो । सानैदेखी बोल्ने कलामा सिपालु किरणको उक्त बसाईले उक्त कला झन निखार्यो । ‘मानिसको दैनिक जिवनसँग जोडिँदा आफ्नोपन महसुस हुनेरैछ । गाउँमा भैंसि ब्याएको, धान काटेका जस्ता कुरा हुँदा उनीहरुसँग अझै बढी घुलमिल हुने मौका पाएँ । त्यो अनुभवले अहिलेको पेशामा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको जस्तो लाग्छ ।’
उर्जा अधिकृतको जागिर छोडेपछि किरणले काठमाडौंकै कलेज पढाउन सुरु गरे । सन् २ हजार ६ सम्म एक्मे कलेजमा ‘इन्जिनियरिङ इकोनमिक्स’ पढाए । किरण सम्झन्छन्, ‘मलाई यो विषय कलेजमा निकै अप्ठ्यारो लाग्थ्यो । तर पछि यही विषय पढाउनु पर्ने भयो । म यो विषय यति गहनताका साथ अध्ययन गर्न थालें कि यसै विषयमा पुस्तक सम्म लेखें र उक्त पुस्तक (इन्जिनियरि इकोनमिक्स) सो समयको ‘हाइ डिमाण्ड’ पुस्तक हुनपुग्यो । यसबाट मैले के सिकें भने जिन्दगीमा डिटरमिनेशन भयो भने केही पनि असम्भव रहेनछ भन्ने बुझें ।’
त्यसपछि थापाले आफ्नो अध्ययनलाई थप अघि बढाउने निधो गरे र सन् २ हजार ६ मा परिवार सहित अस्ट्रेलिया हानिए । मेलबर्न्स्थित मेलबर्न विश्वसवद्यालयबाट इन्जिनियरिङमा मास्टर्सको पढाई सके । उनले पढाई सकेर स्थानीय काउन्सिलमा ट्राफिक इन्जिनियरको काम सुरु गर्दै थिए । सोही समय विश्वभर आर्थिक मन्दि सुरु भयो । उनी स्थानीय काउन्सिलमा ट्राफिक इज्निनियरको काम गर्ने भएकाले जागिर गुम्ने खासै डर भने थिएन । हरेक दिन टिभि हेर्दा उनले फाइनान्सको बारेमा निकै बुझ्ने मौका पाए । उनी सम्झन्छन्, ‘इन्जिनियरिङ इकोनमिक्स पढाउँदै सुरु भएको अर्थतन्त्रसँगको निकटता अस्ट्रेलियाको मन्दिसम्म पुग्दा अझै बढ्यो । त्यो मन्दिका अनेक नकरात्मक पाटो हुँदा हुँदै पनि जीवनमा अर्थको महत्व भने राम्रैसँग महसुस गरे । त्यसपछि मैले आफ्नो जीवनको यात्रा नै परिवर्तन गर्ने निधो गरें ।’
पिआर पाएपछिका कष्ट
इन्जिनियरिङबाट फाइनान्समा फड्को मार्ने निर्णय लिन उनले उपयुक्त समय पर्खेनन्, बरु निर्णय लिएपछिको समयलाई आफु अनकुल बनाउन कुनै कसुर छोडेनन् । पिएचडी अध्ययनका लागि अस्ट्रेलियाका करिब १२ वटा विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति अप्लाई गरे । प्रायमा रिजेक्ट भएपछि अन्तत सिड्नीस्थित “यूनीभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी सिड्नी” मा उनको आवेदन स्विकृत भयो । त्यसपछि उनी सिड्नी सर्नुपर्ने भयो ।
मेलबर्नबाट सिड्नी आउँदा उनको अवस्था निकै जटिल थियो । २ साना छोराछोरीसहित कोठा नपाएर हप्तादिन सिड्नीका सडकमा भौतारिएका दिन उनी कहिल्यै भुल्दैनन् । ‘हप्तादिन होटलमा बसिसकें, कोठा पाइएन । पैसा सकिन लागिसक्यो । त्यही कोठामा चाउचाउ पकाएर सम्म छाक टारियो । सिड्नीको होटलमा लामखुट्टेले टोकेको अनुभव म सँग छ । पिआर भइसकेपछि पनि यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएँ भन्दा धेरैलाई कथाजस्तो लाग्नसक्छ ।’
त्यसपछि उनले बल्लतल्ल समरहिलमा १ बेडरुमको थोत्रो घर भाडामा पाए र त्यहींबाट फाइनान्सको अध्ययन सुरु गरे । ‘मन्दिको समय हुँदाखाँदाको जागिर छोडेर सिड्नी हानिएको थिएँ । विश्वविद्यालयले वार्षिक २० हजार डलर खर्च दिन्थ्यो । मैले वर्षेनी १४ हजार घर भाडा वापत तिर्नुपथ्र्यो । ६ हजारले अरु खर्च पुर्याउनुपथ्र्यो । तर मेरो पिआर भइसकेकाले बच्चाहरुको सेन्ट्रललिंकबाट भत्ता आउँथ्यो र केही सहज भयो ।’ सिड्नीबाट मेलबर्न सराईबाट किरणले जिन्दगीमा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि विचलित हुनु हुँदैन भन्ने महसुस गरे । ‘पिआर भइसकेको थियो । आखिर त्यो संघर्ष नगरिकन पनि राम्रो जीवन बाँच्न सक्थें । तर मैले एउटा महत्वकांक्षा बोकेको थिएँ । त्यसका लागि केही त्याग गर्नुपर्यो र गरें पनि तर विचलित भने भईन ।’
मेलबर्नबाट सिड्नीसम्म आइपुग्दा मात्रै पनि किरणका जिवनमा धेरै घटना घटिसकेका थिए । उनले फरक बाटो रोजेपछि धेरैले उनलाई क्रेजी पनि भने । तर उनले अरुको कुरा सुनेनन् र निरन्तर आफ्नै बाटोमा अघि बढे । यसै क्रममा व्यवसायमै जम्ने उनको मानसिकता पलायो । त्यतिबेलासम्म उनले क्यापकनबाट १०–१२ हजार डलर पनि कमाइसकेका थिए । अन्य व्यवसायमा पनि हात हाल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता पलायो र पिज्जा सप सुरु गरे । ‘नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नुपर्छ भनेर स्ट्यानमोरमा पिज्जा रेष्टुरेन्ट खोलें । तर त्यो रेष्टुराँ ३ महिना पनि चलाउन सकिन । रेष्टुरेन्ट डुबेपछि मैले के निक्र्यौल गरें भनें आफुसँग विशेष खुबी नभएको या आफुसँग दक्षता नभएको अवस्थामा कुनैपनि क्षेत्रमा हात हाल्नु हुँदैन भन्ने महसुस भयो ।’
उक्त व्यवसायबाट किरणले त्यतिबेलाको आफ्नो हैसियत हेर्दा निकै ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपर्यो । उनी सम्झन्छन्, ‘सन् २ हजार १२ को नोभेम्बरमा म सँग नगद, फर्निचर सबै गरेर जम्मा १२ हजार डलर बाँचेको थियो ।’
त्यस्तो अवस्थामा के कुराले अगाडी बढ्ने हौसला आयो त ? उनी सम्झन्छन्, मैले र श्रीमती बसेर यस विषयमा गहन छलफल गर्यौं । उक्त घटनालाई जिन्दगीको महत्वपूर्ण पाठका रुपमा ग्रहण गर्दै अघि बढ्ने निधो गर्यौं ।’ त्यसैले उनलाई रेष्टुरेन्ट डुबेको अवस्था सम्झिदा त्यती दुख लाग्दैन । उनी भन्छन्, ‘त्यो मेरो लक्ष्य थिएन । म सफल भएको भए म त्यसैमा अल्झिन्थें र रेष्टुरेन्ट साहु भएर बस्थें , सायद, अहिलेको सफलता मेरो हातमा हुँदैनथ्यो होला ।’
उनी भन्छन्, ‘समाजमा २ थरिका मान्छे देखेको छु, एकथरी मान्छे आफै समस्या देख्छ आफै समाधान खोज्छ र आफै दंग पर्छ । अर्कोथरी मान्छे आफैलाई विश्वास गर्छ । मैले त्यो समयमा अरुको कुरा सुनिन, आफैलाई विश्वास गरें र अघि बढें ।’ किरण आफैले सन् २ हजार ९ मा क्यापकन दर्ता गरे र सन् २ हजार ११ बाट होमलोनको काम सुरु गरे ।
झेलाबाट सुरु भएको कम्पनीले कागजपत्रका काम विश्वविद्यालयको प्रिन्टरबाट चलाउँथ्यो भने मिटिङ कक्ष पार्क तथा रेष्टुराँहरु हुनेगर्थे । उक्त कम्पनीबाट किरणले सन् २ हजार ११ मा मात्र काम सुरु गरे । ‘घर किन्छु मात्र भन्नुहोस्’ भन्ने स्लोगनसहित सुरु भएको कम्पनिले कारोबारको पहिलो वर्षमै २–४ वटा काम हात पार्यो र १०–१२ हजार डलर पनि कमाो । त्यसपछि बीचमा रेष्टुरेन्टमा हात हलेका किरणले असफलताको स्वाद चाखिसकेका थिए । त्यसपछि किरणले क्यापकनलाई नै निरन्तरता दिन थाले । सन् २ हजार १२ मा करिब २० हजार डलर कमाएको क्यापकन १३ मा आफ्नै खर्चमा २ जना कर्मचारी हायर गर्ने अवस्थामा पुग्यो । त्यसपछि सय मिलियनको लोन स्वीकृत गर्न थालेको कम्पनिले १ सय २० मिलियन सम्मको लोन स्वीकृत गर्न थाल्यो । सन् २ हजार १७ मा पनि उत्कृष्टको लिस्टिङमा परेका किरण १८ मा २० औं नम्बरमा उक्लिए ।
यति छोटो समयमा यति ठूलो सफलता कसरी सम्भव भयो त ? किरण सम्झन्छन्, ‘ मैले व्यवसाय सुरु गर्दा नेपाली समुदायमा घर किन्ने चलन सुरु भइसकेको थिएन । मैले घर किन्नुपर्छ । घरजग्गामा लगानी गर्दा आफ्नो जिवन सुरक्षित हुनुका साथै लगानी पनि सुरक्षित हुन्छ भन्ने सिकाएँ । हामीले घर किन्दा मान्छेको अवस्था अनुसारको प्रपर्टि छनौट गरेर बैंक लोन स्विकृत गराइदिने हो । समुदायका मानिसले यो कुरा बुझ्नुभयो र हामी अहिले यो अवस्थामा छौं । अस्ट्रेलियामा नेपालीहरुको आर्थिक–सामाजिक अवस्थामा पनि यसले सकरात्मक प्रभाव पारेको छ, सुध्रिएको छ ।’
सफलता ठूलो देखिएपनि यसभित्रका अनेकन चुनौतिहरु पनि किरणले सामना गर्नुपर्छ । ‘दिइएका सबै आवेदन अप्रुभ हुँदैनन् । हरेक ग्राहकहरु हाम्रो मान्यता अनुसार चल्न खोज्दैनन् । हाम्रो मान्यता हजारौं ग्राहकहरुको विश्वास पनि हो र यसैको जगमा सफलता उभिएको छ’, किरण सुनाउँछन् ।
अस्ट्रेलियन सेयर मार्केटमा लिस्टिङ
व्यक्तीबाट सुरु भएको संस्था आफ्नो सक्र्रिय ६ वर्षको अवधिमा नै अस्ट्रेलियाको २० औं उत्कृष्ठ बनेको छ भने ५ जनाको सदस्य सहित मेलबर्न र एडिलेडमा फैलिसकेको छ । त्यसो भए अब क्यापकनको उदेश्य अस्ट्रेलियाभर फैलने हो त ? यो प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘मैले क्यापकन सुरु गरेर बाटो देखाइदिएँ, अब गर्ने पालो नयाँ पुस्ताको हो । कैयन मानिसहरु सपना देख्न डराउँछन् र कैयन सपनाहरु त्यतिकै हराएर जान्छन्र तर, म सपना देख्न डराउँदिन्र कहाँसम्म पुगिन्छ थाहा छैन, तर अब मैले देख्ने सपना भनेको क्याप्कनलाइ शेयर मार्केटमा लिस्टिंग हुनयोग्य बनाउने स्केल सम्म वृद्धि गर्ने हो ।’
त्यसो त किरणको लक्ष्य लिस्टिङ सम्मको मात्र होइन । उनी अर्को वर्ष केही नयाँ गर्ने सोंचमा छन् । ‘अब मैले लगानीको बाटो फेर्नुपर्छ, घर जग्गा सम्बन्धित नै तर केही ठूलो । सोंच्दै छु, अर्को वर्ष हात हाल्छु’, किरण योजना सुनाउँछन् ।
१६ घरका मालिक
यो व्यवसायबाट किरणले मनग्गे आम्दानी गरेका छन् । उनको आम्दानी मात्र गरेका छैनन्, ग्राहकको ठूलो समुह पनि बनाएका छन् । ६ वर्षमा किरणले अस्ट्रेलियाका विभिन्न सहरमा १६ वटा घर जोडेका छन् जसको मुल्य करिब १२ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर रहेको छ । तर आर्थिक कमाई भन्दा ठूलो ग्राहकको विश्वास रहेको उनको बुझाई छ । ‘यो अवधिमा म सँग धेरै जना मानिसहरु जोडिन आइपग्नुभयो । ग्राहकको रुपमा थुप्रै राम्रा मानिसहरुको सम्पर्कमा आइपुगेको छु, जसमध्य कति त धेरै नजिकका पनि बनेका छन््र मैले जिवनभरलाई कमाएको भनेको यत्ति हो । यसले मलाई अर्को व्यवसायमा हात हाल्न पनि सघाउँछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’
नेपाल फिर्तीः म गलत हुन चहान्न
किरण अस्ट्रेलिया छिरेको १२ वर्ष मात्र भयो । यो अवधिमा उनले नाम र दाम दुवै कमाए भने जीवन जिउने कला पनि राम्रैसँग सिके । अस्ट्रेलिया लगायतका विभिन्न मुलुकमा सफल भएका नेपालीहरु नेपाल फर्किएर लगानी गरेका छन् । तर किरण भने आफु अझै त्यति लायक नभईसकेको सुनाउँछन् उनी भन्छन्, ‘नेपालको अवस्थाबारे म निकै धेरै बुझ्न खोज्छु। नेपालको अवस्था अझैपनि उस्तै पाउँछु, लगानीमैत्री छैन । सहजरुपमा व्यवसाय संचालन गर्न भ्रष्टाचार, राजनीतिक दललाई प्रभावमा पारेर काम गर्नुपर्ने जस्ता धेरै गलत बाटो हिंड्नुपर्छ । म त्यो बाटो हिंड्न चहान्न । मेरा बिजिनेसका व्यक्तिगत कलाहरु अस्ट्रेलियामा नै सिकेको र यहीं नै बिकास भएको हुनाले नेपालमा बिजिनेश गर्न खोज्दा व्यक्तिगत रुपमा आफैलाइ अझै चुनौतीपूर्ण लाग्नेरहेछ । एक बोतल वाइन अफर गरेको निहुँमा भ्रस्टाचारको मामिला खेप्ने अस्ट्रेलियामा सिकिएको बिजिनेस स्किललाइ अलि “ज्याक“ नलाई काम नबन्नेर बिग्रन नदिनेर छिटो बन्ने बातावरण भएको नेपालमा प्रयोग गरियो भने मलाइ नैतिक रुपमा संकट पर्न सक्दछ्र कि त मैले पनि त्यहि बाटोमा हिंड्नु पर्यो, कि त केहि नगरी सिधा हिसाबले बिजिनेस गर्न खोज्दा हुन सक्ने सम्भावित क्षति व्यहोर्न सक्ने आँट हुनुपर्यो्र यी दुवै सामर्थ्य अहिलेलाई म संग छैन ।
यसको मतबल म नेपाल फर्कनै चहान्न भन्ने होइन । आफ्नो नेतृत्वमा भन्दापनि बरु यदि कसैले राम्रो प्रोजेक्टको कन्सेप्ट ल्याएमा चाहिं आफु त्यसमा सामिल हुन सकिन्छ।’
डु, रिभ्यु एण्ड करेक्ट
व्यवसायीक सफलता व्यक्ती, संरचना, आर्थिक सामाजिक अवस्थामा भर पर्छ तर त्यसबाहेक अन्य केही महत्वपूर्ण तत्वहरुले पनि सफलतालाई योगदान पुर्याउँछन् । किरणको बुझाईमा मानिस लगनशील हुनुपर्छ, आफुले गरेको कामको मुल्यांकन र समिक्षा गर्नु पर्छ र आवश्यक्ता अनुसार परिमार्जन गर्न सक्नुपर्छ । उनी भन्छन्,‘ डु रिभ्यु एण्ड करेक्ट । यति गर्न सक्यो भने व्यवसायिक सफलताको न्युनतम संरचना तयार हुन्छ । यसैले व्यवसायलाई गति दिन्छ ।’
अदालतमा बयान चलिरहँदा भरतपुरमा रवि लामिछानेका समर्थकहरूकाे ठूलाे भीड जम्मा
चितवन । जिल्ला अदालत चितवनमा पत्रकार शालिकराम पुडासैनीलाई आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा बयान लिन सुरु भएको छ ।